7 Best Day Njem Site Venice | Save A Train
Home > Travel Europe > 7 Best Day Njem Site Venice
Oge Ọgụgụ: 6 nkeji(Emelitere ikpeazụ On: 21/02/2020)
Dị ka ihe unu maara, Venice bụ kasị iche ụtọ obodo nile nke Europe, ma ọ bụrụ na ọ bụghị ụwa. The Ịtali mere ya kpamkpam si ọwa mmiri na obere amaokwu, niile nke na-edina ke isuo. Nke a emewo ka obodo n'ime otu n'ime ndị kasị mma ebe na Europe. Ma, anyị niile maara na. Gịnị ọtụtụ ndị amaghị bụ eziokwu na e nwere ihe ọzọ na-abụghị nke Venice. That is why we wanted to prepare a list of some of the best day trips from Venice. Ị gaghị-emechu ihu site ọ bụla n'ime ndị a na-aga na nlegharị anya. Ya mere, ma ọ bụrụ na i nwere mmasị na eleta ụfọdụ na-akpali akpali ebe via ụgbọ okporo, na-agụ 7 Best Day Njem Site Venice Na Italy!
1. Otu Of The Nnọọ Best Day Njem Site Venice bụ: Verona
Verona bụ na onye na kpokọtara obodo dị na Veneto region, Northern Italy onye ọ bụla maara. Shakespeare mere ka ọ ebighi mgbe o kpebiri iji ya dị ka ọnọdụ nke ya a ma ama Romeo na Juliet play. taa, obodo bụ ewu ewu nnọọ, na o nwere ọ bụla nri na-.
Ị ga-ahụ Verona nnọọ ọmarịcha, na ọ bụ otu n'ime kacha mma ebe maka ụbọchị a tour si Venice. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịga ebe ahụ ụgbọ okporo ígwè, ị ga-ahụ ya na- kacha mma na kacha mfe nhọrọ mgbe na-aga site Venice.
Ndị hụrụ ya n'anya Italy mara na Florence bụ onye nke kasị mma ebe nleta. Ọ bụkwa otu nke kasị mma na ebe ileta na a zuru ụbọchị njem si Venice.
Ọtụtụ ndị na-ejedebe chefuru na ha nwere ike iru ya na Venice n'ihi na ọ bụ a bit n'ihu n'ebe. Otú ọ dị, i nwere ike iru Florence si Venice na naanị awa abụọ nọkwa a elu-ọsọ ụgbọ okporo. nke ahụ ụzọ, ị ga-esi na-ahụ ọtụtụ n'ime pụtara Okirikiri dịgasị n'ala ala n'etiti Venice na Florence.
Isi ihe ị ga-ahụmahụ Florence bụ mara mma n'okporo ámá na- ụwa a ma ama Florence Cathedral ma ọ bụ ndị Duomo eme Firenze. Mgbe ị na-atụle na, Florence na-aghọ onye mara mma ebe maka niile njem.
3. Otu Of The Nnọọ Best Day Njem Site Venice: Padua
Ọ bụghị onye ọ bụla maara banyere Padua (Italian: Padova), ma ọ bụ ka a na-aga n'ihi otu n'ime n'elu ụbọchị njem si Venice. Nke ahụ bụ n'ihi na obodo nwere ihe niile a nnukwu Italian obodo kwesịrị nwere. Anyị na-ndammana na-ekwu banyere oké nri, pụtara ije, na ebube piazzas.
Na-aga site Venice na Padua na-kacha mma enweta via ụgbọ okporo dị ka ndị na-agba ịnyịnya na-aga ebe ụfọdụ pụtara ebe ke Italy. Plus, ọ bụkwa ndị kasị ala na kasị na nhọrọ dị gị.
Mgbe ị ga-esi Padua, Jide n'aka na ị gaa Prato della Valle obodo center. Ọ bụ otu n'ime ndị isi na n'ámá nke obodo, na ọ na-ejupụta na ọmarịcha awụ onye-apụghị ileghara anya.
Venice na Padua Ụgbọ oloko
Lake Garda bụ kasị ibu ọdọ ke Italy. Ọ bụkwa otu n'ime ndị kasị ama. Na o nwere ọ bụla mere ha ga-. Ọdọ gbara nile mara mma kere eke pụrụ ime. Ị ga-ahụ magnolias, cypresses, lemon osisi, olive osisi, Dolomite ugwu na ọtụtụ ihe ndị ọzọ gburugburu Lake Garda.
Ị nwere ike iru ọtụtụ obodo dị n'ikperé ọdọ si Venice. Otú ọ dị, anyị na-eche na abụọ nke kacha mma ụbọchị njem si Venice na Lake Garda kwesịrị gụnyere obodo nke Peschiera na Sirmione. Iji ruo ya na Lake Garda, ị pụrụ otu n'ime ọtụtụ ụgbọ oloko na ezumike Venice ụbọchị ọ bụla.
5. Otu Of The Nnọọ Best Day Njem Site Venice: Siena
Ọ bụghị onye ọ bụla maara banyere Siena, ma ọ bụghị a obodo na ị chọrọ enweteghi. Ọ bụ ọla nke Tuscany na kasị iche ọmarịcha ochie obodo ị ga-esi na-ahụ.
The obodo bụ obere, ma ọ na-ama maka ya cobbled n'okporo ámá na ihe ndị dị ebube isi square maara dị ka Piazza del Campo. Ọzọkwa, pụtara ìhè Magnia Tower adade na otu square, na na ọ bụ tallest Ọdịdị ị ga-ahụ na Siena.
The ụgbọ okporo ígwè bụ a bit ogologo dị ka obodo dị anya n'ebe. Otú ọ dị, ebe Siena bụ obere, ị ka nwere ike nwere ihe dị ịtụnanya ụbọchị njem si Venice ma ọ bụrụ na ị na-ekpebi na-aga ebe.
Venice na Siena Ụgbọ oloko
Siena bụghị nanị ebube obodo Tuscany. San Gimignano bụ onye ọzọ. Ma nke ha na- UNESCO ụwa nketa saịtị, ma naanị San Gimignano nwere ike ujo ị na ya skyline mere nke ọtụtụ ochie elu. Ọ bụ n'ezie a anya ịhụ na onye ị ga-echefu.
ndammana, ị nwere ike ịga obodo via ụgbọ okporo dị ka ọ bụ mfe na kasị ụzọ iru saịtị si Venice. Ihe ọzọ bụ na, ị ga-esi na-ahụ n'elu kwuru banyere towering skyline si nkasi obi nke oge a Italian ụgbọ okporo.
Florence na San Gimignano Ụgbọ oloko
Arezzo ka San Gimignano Ụgbọ oloko
Pisa ka San Gimignano Ụgbọ oloko
Venice na San Gimignano Ụgbọ oloko
Trieste bụ isi obodo nke Friuli Venezia Giulia region na ụgha na ókè-ala na Slovenia. Ọ nwere a pụrụ iche onodu na niile nke Italy na kemgbe nke mba maka sonso 70 afọ. N'ihi na nke a, Trieste bụ a pụrụ iche mix nke ọtụtụ European mmetụta.
Otú ọ dị, na mix-eme ka ọ pụrụ iche na a magburu onwe ya ebe nleta. Ị nwere ike iru obodo mfe via okporo ígwè site Venice. The dum na-agba ịnyịnya dị nnọọ mkpụmkpụ, ma akụkụ dị mkpa bụ na ọ na traverses ndị mara mma Italian n'ụsọ oké osimiri. All nke na ndoro-eme ka ọ magburu onwe ebe maka otu n'ime ụbọchị gị njem si Venice.
Venice na Trieste Ụgbọ oloko
Key Takeaways About Best Day Njem Site Venice
Na mkpokọta, Venice ụgha n'ọnọdụ pụrụ iche. Ị ga-esi njem ka ọtụtụ na-akpali ebe gafee ukwuu nke Italy na ala. Plus, na otu ọnọdụ na-enye ohere maka ihe niile ndị a ụbọchị njem si Venice na ọtụtụ ndị ọzọ.
Ọ bụrụ na ị dị njikere na-amalite otu n'ime ndị a ahụmahụ, ihe niile ị chọrọ ime na-bulie ọkacha mmasị gị ebe. Mgbe niile dị n'aka ekpe bụ n'ihi na ị na-eme bụ ịga na ọdụ ụgbọ okporo ígwè. Ọ bụrụ na ị nwere ihe ọ bụla ajụjụ ndị ọzọ, na-eche free kọntaktị Save A Train, na anyị ga-enwe obi ụtọ inyere.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “7 Best Day Njem Site Venice Na Italy” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fbest-day-trips-venice%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)
europetravel GardaLake Padua trainjourney njegharị travelitaly Trieste Verona